‘Valentine's Day’ ကို မကြိုက်တဲ့ ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ် (၇) ဦး
13 Feb 2018 . 5:37 PM
တချို့တွေက ‘Valentine’s Day’ ကိုရောက်ရင် ခွင့်ယူပြီး ရည်းစားနဲ့ သွားတွေ့ကြတယ်၊ ကျောင်းသားတွေဆိုရင်လည်း ကျောင်းမတက်ကြတော့ဘူး၊ ပန်းခြံတွေ ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာပဲ အချိန်ကုန်တော့တယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့တွေက ‘Valentine’s Day’ ကို အသိအမှတ်မပြုဘဲ ကိုယ့်အတွက် အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုသာ လုပ်ဆောင်ကြတာပါ။ ‘Valentine’s Day’ ကို ခါးခါးသီးသီးမုန်းတီးကြတဲ့ ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဖော်ပြချင်ပါတယ်။
(၁) Jane Lynch
‘Glee’ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ မင်းသမီးကြီး ‘Jane Lynch’ ဆိုရင် ‘Valentine’s Day’ ကို ဆန့်ကျင်တဲ့အထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကပါ။ သူမအတွက် ပျင်းရိဖွယ်ကောင်းတဲ့ နေ့တစ်နေ့အဖြစ် မြင်နေပြီး ‘Valentine’s Day’ ဆိုတာ ရယ်စရာကောင်းတဲ့နေ့၊ ပို့စကတ်သမားတွေ စီးပွားရှာလို့ကောင်းတဲ့နေ့လို့တောင် အားမနာပ ပြောဆိုဖူးပါတယ်။
‘Silver Linings Playbook (2012)’ ဇာတ်ကားရဲ့မင်းသမီးချော ‘Jennifer Lawrence’ ဆိုရင် ‘Valentine’s Day’ ကို အသိအမှတ်မပြုတဲ့အထဲမှာ ပါတယ်။ သူမဟာ ရည်းစားရှိနေပေမယ့် အဲဒီနေ့မှာဆိုရင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မုန့်စားတယ်၊ လျှောက်လည်တတ်ပါတယ်။ ‘Valentine’s Day’ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဘယ်တော့မှ မဖွင့်ဟဖူးပါဘူး။
(၃) Ashton Kutcher
အတိတ်မှာ ဘယ်လိုဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေ ရှိခဲ့မှန်းတော့ မသိဘူး။ အမေရိကန်မင်းသား ‘Ashton Kutcher’ ဆိုရင် လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာ သဘောကောင်းသလောက် ‘Valentine’s Day’ ကိုတော့ ခါးခါးသီးသီး မုန်းတယ်။ ‘ကျွန်တော် ‘Valentine’s Day’ ဆိုတာကြီးကို မုန်းတယ်၊ အော်ဂလီဆန်တယ်။ ကျွန်တော့်အတွက် ၃၆၅ရက်လုံး ချစ်သူများနေ့ပါပဲ။ ဘာကြောင့် မုန်းရလဲဆိုတာ ရှင်းမပြတတ်ဖူး။ တစ်နှစ်လုံးမှာ အမုန်းဆုံးနေ့က အဲနေ့ပဲ” လို့ ပြောဖူးပါတယ်။
(၄) Chance the Rapper
‘Chance the Rapper’ လို့ ခေါ်ကြတဲ့ အမေရိကန်အဆိုတော် ‘Chancelor Jonathan Bennett’ က ‘Valentine’s Day’ ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်သူပါ။ “ကျွန်တော်က ‘Valentine’s Day’ ကို ဘယ်တော့မှ အားမပေးဘူး။ အဲဒီနေ့မှာ ရည်းစားနဲ့ ချိန်းတွေ့မှာလည်း မဟုတ်ဖူး။ သွားစမ်းပါ။ အဲဒီလိုနေ့မျိုးတွေ” လို့ လူမှုကွန်ရက် တွတ်တာ (Twitter) ကနေ ရေးသားဖူးပါတယ်။
(၅) Carrie Underwood
‘American Idol’ ဆုရှင် ‘Carrie Underwood’ ကလည်း ‘Valentine’s Day’ ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို မနှစ်မြို့သူပါ။ “ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၄) ရက်နေ့ကို ချစ်သူများနေ့လို့ ဆိုရင် တခြားနေ့တွေမှာ သူက မချစ်တော့ဘူးပေါ့။ တကယ်ဆို ရှိကို မရှိသင့်တာပါ။ ၃၆၅ ရက်လုံး ချစ်နေရမှာလေ” လို့ People မဂ္ဂဇင်းမှာ ဆိုဖူးပါတယ်။
(၆) Nina Dobrev
‘Flatliners (2017)’ မင်းသမီး ‘Nina Dobrev’ ကလည်း ‘Valentine’s Day’ ကို အလေးမထားသူပါ။ “အဲဒီနေ့က တခြားနေ့တွေနဲ့ မတူဘူး။ ‘Valentine’s Day’ ကို Single တွေက ဘယ်ကြိုက်ပါ့မလဲ။ စုံတွဲသမားတွေက ပျော်တာပေါ့။ ကျွန်မအမြင်ပြောရရင် ‘Valentine’s Day’ ဆိုတာကြီးက စီးပွားရေးသမားတွေအတွက် လုပ်ကွက်ပဲ။ စုံတွဲတွေအတွက် ဘာကောင်းကျိုးမှ မပေးဘူး” MTV အင်တာဗျူးမှာ ဆိုသွားပါတယ်။
(၇) Oprah Winfrey
နာမည်ကျော်ရုပ်သံတင်ဆက်သူ ‘Oprah Winfrey’ ဆိုရင် ‘Valentine’s Day’ က စိတ်ပျက်စရာနေ့လို့တောင် သတ်မှတ်ထားသူပါ။
“အဲဒီနေ့မှာဆိုရင် လူတွေအများကြီး ပျော်ရွှင်ကြတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်မအတွက်တော့ စိတ်ပျက်စရာနေ့တစ်ခုပဲ” လို့တောင် ပြောသွားပါတယ်။
ကဲ . . . အခုဖော်ပြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် (၇) ဦးကတော့ ‘Valentine’s Day’ ကို မနှစ်သက်တဲ့သူတွေပါ။ စာဖတ်သူကိုယ်တိုင်ရော ‘Valentine’s Day’ ကို ဘယ်လိုမြင်လဲ။
‘Valentine’s Day’ ကို မကွိုကျတဲ့ ကမ်ဘာကြျောပုဂ်ဂိုလျ (၇) ဦး
တခြို့တှကေ ‘Valentine’s Day’ ကိုရောကျရငျ ခှငျ့ယူပွီး ရညျးစားနဲ့ သှားတှကွေ့တယျ၊ ကြောငျးသားတှဆေိုရငျလညျး ကြောငျးမတကျကွတော့ဘူး၊ ပနျးခွံတှေ ရုပျရှငျရုံတှမှောပဲ အခြိနျကုနျတော့တယျ။ ဒါပမေယျ့ တခြို့တှကေ ‘Valentine’s Day’ ကို အသိအမှတျမပွုဘဲ ကိုယျ့အတှကျ အရေးကွီးတဲ့အရာတှကေိုသာ လုပျဆောငျကွတာပါ။ ‘Valentine’s Day’ ကို ခါးခါးသီးသီးမုနျးတီးကွတဲ့ ကမ်ဘာကြျောပုဂ်ဂိုလျတှကေို ဖျောပွခငျြပါတယျ။
‘Glee’ ရုပျသံဇာတျလမျးတှဲရဲ့ မငျးသမီးကွီး ‘Jane Lynch’ ဆိုရငျ ‘Valentine’s Day’ ကို ဆနျ့ကငျြတဲ့အထဲမှာ ထိပျဆုံးကပါ။ သူမအတှကျ ပငျြးရိဖှယျကောငျးတဲ့ နတေ့ဈနအေ့ဖွဈ မွငျနပွေီး ‘Valentine’s Day’ ဆိုတာ ရယျစရာကောငျးတဲ့နေ့၊ ပို့စကတျသမားတှေ စီးပှားရှာလို့ကောငျးတဲ့နလေို့တောငျ အားမနာပ ပွောဆိုဖူးပါတယျ။
‘Silver Linings Playbook (2012)’ ဇာတျကားရဲ့မငျးသမီးခြော ‘Jennifer Lawrence’ ဆိုရငျ ‘Valentine’s Day’ ကို အသိအမှတျမပွုတဲ့အထဲမှာ ပါတယျ။ သူမဟာ ရညျးစားရှိနပေမေယျ့ အဲဒီနမှေ့ာဆိုရငျ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ မုနျ့စားတယျ၊ လြှောကျလညျတတျပါတယျ။ ‘Valentine’s Day’ နဲ့ ပတျသကျတဲ့အကွောငျးအရာတှကေို ဘယျတော့မှ မဖှငျ့ဟဖူးပါဘူး။
အတိတျမှာ ဘယျလိုဖွဈရပျဆိုးတှေ ရှိခဲ့မှနျးတော့ မသိဘူး။ အမရေိကနျမငျးသား ‘Ashton Kutcher’ ဆိုရငျ လူမှုရေးကိစ်စတှမှော သဘောကောငျးသလောကျ ‘Valentine’s Day’ ကိုတော့ ခါးခါးသီးသီး မုနျးတယျ။ ‘ကြှနျတျော ‘Valentine’s Day’ ဆိုတာကွီးကို မုနျးတယျ၊ အျောဂလီဆနျတယျ။ ကြှနျတေျာ့အတှကျ ၃၆၅ရကျလုံး ခဈြသူမြားနပေ့ါပဲ။ ဘာကွောငျ့ မုနျးရလဲဆိုတာ ရှငျးမပွတတျဖူး။ တဈနှဈလုံးမှာ အမုနျးဆုံးနကေ့ အဲနပေဲ့” လို့ ပွောဖူးပါတယျ။
‘Chance the Rapper’ လို့ ချေါကွတဲ့ အမရေိကနျအဆိုတျော ‘Chancelor Jonathan Bennett’ က ‘Valentine’s Day’ ကို ပွငျးပွငျးထနျထနျ ကနျ့ကှကျသူပါ။ “ကြှနျတျောက ‘Valentine’s Day’ ကို ဘယျတော့မှ အားမပေးဘူး။ အဲဒီနမှေ့ာ ရညျးစားနဲ့ ခြိနျးတှမှေ့ာလညျး မဟုတျဖူး။ သှားစမျးပါ။ အဲဒီလိုနမြေို့းတှေ” လို့ လူမှုကှနျရကျ တှတျတာ (Twitter) ကနေ ရေးသားဖူးပါတယျ။
‘American Idol’ ဆုရှငျ ‘Carrie Underwood’ ကလညျး ‘Valentine’s Day’ ရဲ့အဓိပ်ပာယျကို မနှဈမွို့သူပါ။ “ဖဖေျောဝါရီလ (၁၄) ရကျနကေို့ ခဈြသူမြားနလေို့ ဆိုရငျ တခွားနတှေ့မှော သူက မခဈြတေော့ဘူးပေါ့။ တကယျဆို ရှိကို မရှိသငျ့တာပါ။ ၃၆၅ ရကျလုံး ခဈြနရေမှာလေ” လို့ People မဂ်ဂဇငျးမှာ ဆိုဖူးပါတယျ။
‘Flatliners (2017)’ မငျးသမီး ‘Nina Dobrev’ ကလညျး ‘Valentine’s Day’ ကို အလေးမထားသူပါ။ “အဲဒီနကေ့ တခွားနတှေ့နေဲ့ မတူဘူး။ ‘Valentine’s Day’ ကို Single တှကေ ဘယျကွိုကျပါ့မလဲ။ စုံတှဲသမားတှကေ ပြျောတာပေါ့။ ကြှနျမအမွငျပွောရရငျ ‘Valentine’s Day’ ဆိုတာကွီးက စီးပှားရေးသမားတှအေတှကျ လုပျကှကျပဲ။ စုံတှဲတှအေတှကျ ဘာကောငျးကြိုးမှ မပေးဘူး” MTV အငျတာဗြူးမှာ ဆိုသှားပါတယျ။
နာမညျကြျောရုပျသံတငျဆကျသူ ‘Oprah Winfrey’ ဆိုရငျ ‘Valentine’s Day’ က စိတျပကျြစရာနလေို့တောငျ သတျမှတျထားသူပါ။
“အဲဒီနမှေ့ာဆိုရငျ လူတှအေမြားကွီး ပြျောရှငျကွတာတော့ ဟုတျပါတယျ။ ကြှနျမအတှကျတော့ စိတျပကျြစရာနတေ့ဈခုပဲ” လို့တောငျ ပွောသှားပါတယျ။
ကဲ . . . အခုဖျောပွတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျ (၇) ဦးကတော့ ‘Valentine’s Day’ ကို မနှဈသကျတဲ့သူတှပေါ။ စာဖတျသူကိုယျတိုငျရော ‘Valentine’s Day’ ကို ဘယျလိုမွငျလဲ။
by redrose .2hours ago